P3D "180_liveries_collection_pack_for_b737-800" နဲ့
မေးခွန်း P3D "180_liveries_collection_pack_for_b737-800" နဲ့
10 လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1276 by titolopez
ငါနှစ်ဦးစလုံးရှိတယ် FSX နှင့် P3D ကြှနျတေျာ့ကို PC တွင်တပ်ဆင်။
ငါ pack ကို install လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ "180_liveries_collection_pack_for_b737-800" တွင်ခဲ့သည် P3D ငါအထဲတွင်ရှိသည်ကြောင့်ဒါပေမယ့် (ကပြီးသား installed ကြောင်းပြောပါတယ် FSX) နှင့်ဖြုတ်ခံရဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်။
10 လအတွင်း 1 လွန်ခဲ့တဲ့သီတင်းတပတ် #1277 by rikoooo
သင့်ရဲ့ဗားရှင်းကဘာလဲ P3D ? ကဗားရှင်းရဲ့ အကယ်.4ရိုးရှင်းစွာနှစ်ဦးစလုံးစစျဆေး FSX နှင့် P3D v4 ။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ထုံးစံ installation ကိုရှေးခယျြနှင့်တစ်ဦး folder ထဲမှာဖိုင်တွေ install ပြီးရင်နှစ်သက်တဲ့ပျံသန်း Simulator ကိုသို့အရာအားလုံးကိုကော်ပီကူး။ အဘို့ဖိုင်တွေကြောင်းသတိပြုပါ FSX များအတွက်ဖိုင်များမှမတူကြ P3Dv4 ။
0.197 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်